5G NSA na 5G SA: Gini bu ihe di iche na ndakọrịta ha | Akụkọ akụrụngwa
Eder Esteban | | General, Nkuzi
Enweela okwu banyere mbata nke 5G maka ọnwa, nke bidoworị itinye ya na mmiri a n'ọtụtụ ahịa na Europe, gụnyere Spain. Ntughari a nwere uzo abuo, nke izizi bụ Hapụ 15 3GPP nke amara nke ọma dị ka 5G NSA (nke na-abụghị nke kwụụrụ onwe ya). Mgbe agba nke abụọ bụ Nhapụ 16 ma ọ bụ 5G SA zuru ezu). Ọ bụ ezie na ịdị adị nke okwu abụọ dị ka ndị a bụ ihe na-eweta ọgba aghara.
Ọ bụ ya mere, Anyị na-agwa gị ihe gbasara 5G NSA na 5G SA, nke mere na ị maara ihe mere e ji nwee usoro abụọ, na mgbakwunye na esemokwu na ndakọrịta n'etiti ha. Ihe kwesiri inye aka ịghọta nkenye nke 5G na uwa taa.
1 Usoro mmalite nke abụọ
2 5G NSA na 5G SA: Ha abụọ bụ 5G mana dị iche
3 Mmekọrịta dị n'etiti 5G NSA na 5G SA
4 5G NSA na-abawanye
Usoro mmalite nke abụọ
A na-ewere usoro abụọ dị na nke a dịka 5G, ọ bụ ezie na anyị agaghị enwe uru niile ruo mgbe ọ ga-abịarute azụmahịa nke 5G SA. Nke a pụtara na enwere ụdị antennas denser karịa nke ejiri maka netwọkụ 4G. Agbanyeghị na nke a abụghị ihe buru oke ibu rue 2021, yabụ a ka nwere ogologo oge ịga.
N'ihe banyere 5G NSA, etinyere akụrụngwa ya ịnọgide na-enwe netwọk 4G isi Evolved Packet (EPC). N'agbanyeghị akụrụngwa, ha abụọ ga-arụ ọrụ site na iji redio dị iche iche echere maka 5G. N'ihe banyere Spain, Vodafone amalitela itinye ya site na iji otu band dị, nke bụ 3,7 GHz. Ndị ọrụ ndị ọzọ dịka Telefónica ma ọ bụ MásMóvil ga-ejikwa ya.
Mpempe ọzọ, nke 700 MHz, nke bụ nke ga - enyere aka ịgbasa 5G, adịbeghị. Ọ gaghị anọ ruo ọkara nke abụọ nke 2020, dị ka amaraworị. A ga-ahazi ụlọ ahịa na nke a, ka anyị wee nwee ike ịtụ anya na ndị ọrụ dịka Orange, Movistar na Vodafone ịkekọrịta achicha na nke a.
5G NSA na 5G SA: Ha abụọ bụ 5G mana dị iche
5G NSA bụ otu na-amalite ugbu a idokwa n'ọtụtụ ahịa na Europe. N'ihi nke a, ndị ọrụ nwere ekwentị dakọtara ga-erite uru site na nnukwu ọsọ, nke n'otu oge ga-abawanye na 2 Gbps. Ọzọkwa na latency nke belata na 10 ms na nkwụsi ike ka ukwuu na njikọ ahụ.
A ga-arụ ọrụ 5G SA mgbe emechara, site na 2020 ọ ga-abụrịrị eziokwu na ọtụtụ ọnọdụ. Nkwa a ga-abụ ọkwa dị mkpa, yana nke gbanwere na echiche a. Ebe ọ bụ na ọ bụ nke ga-enye ohere itinye ọrụ ndị ọzọ, dị ka ịkwọ ụgbọala kwụụrụ onwe ya, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihe banyere ekwentị, mkpa nke ntinye a bụ maka ọsọ, nke ga-abawanye nke ọma. Na mgbakwunye inwe ọbụna obere uhere na ọsọ ọsọ dị elu.
Mmekọrịta dị n'etiti 5G NSA na 5G SA
Dị ka ọ na-emekarị na ndị a, anyị na-ahụ onwe anyị na mgbanwe doro anya na nke a, ọkachasị ugbu a na-etinye 5G gburugburu ụwa. N'ihi na nwee ike inweta uru na uru ndị a nke a na-enye, anyị ga-enwe ọnụego na onye ọrụ na-enye anyị ọrụ 5G. Na mgbakwunye na ịnweta mkpuchi maka ya na ịnwe ekwentị nke dakọtara. Luckily, ndị a niile nhọrọ bụ inweta na Spain.
Ọ bụ ezie na n'oge a, enwerekwa iche iche. Ebe ọ bụ na ebugharị ọrụ a na ụzọ abụọ: 5G NSA na 5G SA. Nke a bụ ihe nwere ike inwe mmetụta mgbe ị na-ahọrọ ekwentị. Mana ndị ọrụ ahụ ga-ahụrịrị na Mbugharị gafere ndị ọrụ. Ma, modem dị na ekwentị ahụ ọ ga-enwe mmetụta doro anya n'akụkụ a, nke anyị na-agaghị echezọ n'oge ọ bụla.
Ebe ọ bụ na enwere ekwentị dị ugbu a maka ọrịre. Naanị nke kwekọrọ na 5G NSA na 5G SA bụ Huawei Mate 20 X 5G, nke bụ ekele maka ojiji nke ụlọ ọrụ Balong 5000 modem. Ekwentị ndị ọzọ, nke kachasị jiri Snapdragon 855 na Qualcomm-mepụtara X50 modem, nwere naanị nkwado NSA. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ na-esote modem ahụ, na-abata na njedebe nke afọ, ga-adaba na NSA na SA.
5G NSA na-abawanye
Anyị nọ ugbu a na usoro 5G NSA. Na Europe ọ nọ na-ebugharị otu maka ọnwa ole na ole, ọ bụ n'oge opupu ihe ubi nke afọ a mgbe mba ndị mbụ na ndị ọrụ malitere ya. Dabere na mba ahụ, enweela ụfọdụ esemokwu doro anya, mana anyị na-ahụ ọganihu zuru oke na nke a, nke doro anya na ọ bụ nkọwa dị mkpa maka ahịa ahụ:
Switzerland etinyela ya na ndị ọrụ Switzerlandcom na Sunrise na June ha nọ na ọnọdụ 218 na mba ahụ-
Finland na-etinye ya na onye ọrụ Elisa (dị na obodo ise kachasị ukwuu na mba ahụ).
Spain etinyela ya site na enyemaka nke Vodafone, nke dị na obodo iri na ise ugbu a
United Kingdom etinyego ya site na enyemaka nke Vodafone ma ọ dịrịla na obodo 7
Alsotali na-adaberekwa na Vodafone ma dị na obodo 17 na mkpokọta
A na-atụ anya na n'oge mgbụsị akwụkwọ nke afọ a, ha ga-eme ya auction ma obu nye ikikere na ahia ndi ozo nke dị mkpa, dị ka France ma ọ bụ Germany. 2020 ga - abụ afọ dị mkpa na mpaghara a na Europe, dịka ọ ga - abụ mgbe ọ ga - apụ na ahịa ndị ọzọ. Ọzọkwa, ụfọdụ ụfọdụ enwere ike ị nwee ọnụego na mba ụfọdụ, ebe a ga-ana ha ego karịa. Yabụ anyị ga-ahụ etu etu ọnụego ndị a si pụta na Europe n'ọnwa ndị na-abịanụ.
N’èzí Europe, ọ bụ ahịa ndị dị n’Eshia na-aka eme nke ọma. South Korea enweela 5SA azụmahịa NSA, na ọ bụ obodo ebe anyị na-ahụrịrị ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị ọrụ. Yabụ n'echiche a, ọ dịka o doro anya na ọ ga-abụ Eshia ebe anyị ga-ebu ụzọ hụ mmụba ya, tupu 5G SA a eruo Europe na 2021.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Kedu ihe dị iche na 5G NSA na 5G SA
Netflix welitere ọnụahịa maka ndị ahịa ochie bidoro na Septemba